ऊर्जा खबरका सम्पादक वियोगीकाे ‘कोरोनाको कर्खा’ शिर्षककाे निबन्ध प्रथम
काठमाडौं । लेखक तथा ऊर्जा खबरका सम्पादक लक्ष्मण वियोगी निबन्ध प्रतियोगितामा प्रथम भएका छन् । उनी कविडाँडा साहित्य समाज चितवनले आयोजना गरेको राष्ट्रिय निबन्ध प्रतियोगितामा प्रथम स्थान हासिल गर्न सफल भएका हुन् । स्याङ्जा स्थायी घर भएका उनको ‘कोरोनाको कर्खा’ शिर्षकको निबन्ध प्...
२०७८ असोज २६
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा कार्यरत कर्मचारीबाट स्थापित र सञ्चालित विद्युतकर्मी साहित्यिक समाजले दुई जना श्रष्टालाई सम्मान गरेको छ । समाजले प्रदान गर्ने ‘अमरज्योति साहित्य सम्मान’बाट संस्थापक कोषाध्यक्ष कवयत्री कमला श्रेष्ठ र साहित्यकार आरआर चौलागाईंलाई सम्मान गरिएको हो ।...
नारी अस्तित्वभित्र प्रेमको गहिराई खोज्दै ‘इन्द्रेणी स्पर्श’
२०७८ भदौ १७
काठमाडौं । पेशाले चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट सञ्जु अधिकारीले आफ्नो पहिलो साहित्यिक कृति ‘इन्द्रेणी स्पर्श’ बजारमा ल्याएकी छन् । पेशासँगसँगै नृत्य र खेलकुदमा समेत रुची राख्ने उनले साहित्यलाई पनि अँगालेकी छन् । यसैको उपज हो, उनको औपन्यासिक कृति ‘इन्द्रेणी स्पर्श’ । घरपरिवार, पेशा,...
वातावरण व्यवस्थापनकाे ‘खाँडाे’ जगाउने साधक
२०७८ जेठ २१
काठमाडाैं । सुनकोसी पारि एक बगाल तन्नेरीहरू रोमाञ्चकारी मुद्रामा देखिए भने वारिपट्टी तिनका संगिनीहरू । तन्नेरीले भाका हाले । “माया त लाउने मन थियो सुनकोसीले छेक्दियो टाढैबाट नमस्कार नक्कली कान्छीलाई ।” आज भन्दा ३०-३५ वर्ष अघि अर्थात् सन् अस्सीको दशकको कालखण्ड थियो,...
इन्जिनियरिङभन्दा धारिलाे सिर्जनशीलता; ‘त्यहाँ देश जलिरहेको थियो ....’
२०७८ ब‌ैशाख १३
काठमाडाैं । ... निष्पट्ट औंशीको रात र, त्यो निद्राको घुराई ! स्नेहिल स्पर्शले उनको वदनमा कुत्कुती लगाउन थाल्दा आफ्नै उमेर र यौवन सम्झेर आफैंलाई आत्मग्लानी भयो । उता उनी संघर्षरत थिइन् । पराल र छ्वालीको तन्नामा रगडिँदै भुइँ कोपर्दै, भित्तो चिथोर्दै ! रिस्ता निभाउँदै थियो, सायद, आज उनीस...
एक कर्मठ इन्जिनियरको ‘मृत्युुसँग लुकामारी’
काठमाडौं । ओठमाथि कालो जुँगा र आँखामा पावरदार चस्मा । शिरमा भादगाउँले टोपी, टोपीमा क्रस खुकुरी । अक्सर सेतो कमिज र कालो पाइन्ट । खुट्टामा कहिले कालो छालाको जुत्ता, कहिले स्पोर्टस । वर्षका अधिकांश महिना वा भनौं दिन उनको पहिरन यही हुन्थ्यो । जाडोमा कालो ज्याकेट थपिन्थ्यो । ढाडमा भिरिरहने एउटा कालो ब्य...
विद्युत् व्यापार विभागका निर्देशककाे बेजोड कविता : ऊ कात्रोमा खल्ती सिलाउँदैछ
२०७६ चैत २०
काठमाडाैं । ... ए कोरोना, शुभ-प्रभात कस्तो छ तिमीलाई ? ooo तिम्रो आगमनले विश्व हल्लियो विज्ञानको आँगनमा मृत्यु हाँस्न थाल्यो अनुसन्धान र उपचार सिमाना र पर्खालले विभक्त भए । मेरो भाषा, मेरो देश, मेरो भूगोल– जय होस् ! ooo कति लज्जित छ मानवता र, यो सभ्यता...
माथिल्लो तामाकोसी शिलन्यास र स्मृति
२०७४ फाल्गुण ७
काठमाडाैं । काठमान्डू घमाइसकेको थियो । २०६८ साल जेठ ३ गते, म समाचारपत्रमा काम गर्न थालेकाे दुई वर्ष हुँदै थियाे । मेरा पाइला कतै जान हिँडेका थिए । लामो न लामो लरीजस्तो बसमा दर्जनौं पत्रकार भरिभराउ थिए । जेठको उष्णताले बसभित्र खपिनसक्नु थियो । निकै बेरपछि राष्ट्रिय सभागृहबाट बस हिँड्यो । उपत्यकाको को...